विश्व प्रसिद्ध च्याट रूले
अर्को जेनेरेशन कुराकानी
१००००० भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू र सयौं अनलाइन स्ट्रिमहरू
पूर्ण नयाँ भिडियो च्याट
केवल यहाँ तपाईं सीधा केटीहरूसँग च्याट कोठा हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको मनपर्नेमा छनौट गर्न सक्नुहुन्छ! केटाहरूले भरिएको कुनै अन्तहीन सूचि छैन। हामी तपाईंलाई सुझाव दिन सबैभन्दा रोचक स्ट्रिमहरू छान्छौं र छान्छौं। थप रूपमा, हामी स्वचालित रूपमा कुनै पनि सम्भावित अनावश्यक भिडियोहरू र प्रयोगकर्ताहरूलाई रोक्दछौं।
निजी र सार्वजनिक कोठा
लचिलो गोपनीयता विकल्पहरूको लागि धन्यवाद, तपाईं एकल व्यक्ति वा साथीहरूको समूहको साथ कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। एकै समयमा एउटा कोठाले चार वेबक्यामहरू देखाउँदछ, असीमित दर्शकहरूको साथ। कुनै च्याट रूले त्यस्ता अवसरहरूको साथ घमण्ड गर्न सक्दैन।
भिडियो स्ट्रिमि schedule तालिका
ताकि तपाइँलाई अगाडि नै थाहा छ जब एक केटी वा एक वेबक्यामको साथ एक मान्छे अनलाइन हुनेछ, र ताकि तपाइँको प्रशंसक थाहा हुनेछ कि कहिले तपाईं अग्रिम मा आशा। यसको लागि, हामीले भिडियो स्ट्रिमि schedule तालिका सिर्जना गरेका छौं। तपाईंले गर्नुपर्ने सबै प्रयोगकर्ताको सदस्यता लिनुपर्दछ र तपाईंको रूलेट अन हुँदा तपाईं सधैं अप टु डेट हुनुहुनेछ।
क्विज र अन्य खेलहरू
हाम्रो च्याटमा तपाईंलाई कब्जा गर्नका लागि, हामीले मिनी-खेलहरूको एक समूह बनायौं। यो एक रूलेट र एक क्लासिक क्विज, एक अनुमान खेल र एक जुवा रूलेट हो। वेब क्यामेरा खोलेर र तपाईंको च्याटमा अन्य व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दा तिनीहरू एकै समयमा खेल्न सकिन्छ।
खैर, तपाईं क्विज प्रश्नहरू स्वचालित रूपमा सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ, तर आफैंले तिनीहरूलाई आविष्कार गर्नुहोस्! तिनीहरूलाई खेल्दै, तपाईं मात्र रमाइलो गर्नुहुनेछ, तर सिक्का पनि जित्नुहुनेछ जुन केटीको लागि उपहारमा खर्च गर्न सकिन्छ वा अपराधीलाई बदला दिन्छ। तपाईंको भिडियो च्याटमा मिनी खेलहरू समावेश गर्नुहोस् र तपाईंको दर्शकहरूले तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छन्।
कुराकानी प्रविष्ट गर्नुहोस्
हाम्रो च्याट रूले - नयाँ व्यक्तिहरू भेट्नको लागि उत्तम स्थान!
कुनै अन्य डेटि service सेवाले तपाईंलाई छिटो गर्न र यति धेरै केटीहरू र केटाहरू लाइभ कुराकानी गर्ने अवसर दिदैन। हाम्रो वेब सेवा परिचितहरूलाई गति दिनेछ र तपाईंको हजारौं मितिहरू बदल्नेछ! उपहार दिनुहोस्, इश्कबाजी, मजाक दिनुहोस् वा ईमानदार कुराकानी गर्नुहोस्। तपाईंले चाँडै बुझ्नुहुनेछ कि यो व्यक्तिले तपाईंलाई सूट गर्छ वा अझ बढी खोज्नु पर्छ। यस अवस्थामा, यदि तपाईंलाई त्यो व्यक्ति मनपर्दैन भने, मात्र बटन क्लिक गर्नुहोस् र तिनीहरूको वेबक्याम अक्षम गर्नुहोस्। त्यहाँ कुनै असन्तोष र अप्ठ्यारो अवस्था हुनेछैन। हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, नियमित मितिमा सबै कुरा अधिक जटिल हुनेछ।
HOT GIRLS भेट्नुहोस्
नयाँ तरीकाले कुराकानी गर्नुहोस्!
यदि तपाइँ घरमा एउटा वेबक्याम र केहि खाली समय। यो प्रयास गर्न निश्चित हुनुहोस्। यहाँ तपाईले वेबकैममा च्याट गर्न सुन्दर कोही भन्दा बढी पाउनुहुनेछ, जबकि तपाईको मनोरन्जन गर्न मिनीगेम्स, रमाईलो भिडियो स्ट्रिमहरू, रेडियो र अन्य धेरै चीजहरूको आनन्द लिइरहनुभएको छ। धेरै युवा मानिसहरू र केटीहरूलाई भिडियो च्याटहरू मनपर्दछ र सक्रिय रूपमा वेब क्यामेरा प्रयोग गर्दछ। भिडियोको मद्दतको साथ परिचित भएदेखि, व्यक्तिगत बैठक बिना नै धेरै सुरक्षित छ। यसका साथै, यो भिडियो क्यामेरा खोल्नको लागि एकदम सजिलो छ र एक खराब मितिको लागि पूरै दिन मार्नु भन्दा राम्रो मान्छे छिटो फेला पार्नुहोस्। यसबाहेक, रौलेटको प्रयोगलाई दर्ता आवश्यक पर्दैन।
तपाईंको स्ट्रिमहरूमा पैसा कमाउनुहोस्!
हामी बुझ्दछौं कि एक क्वालिटी शो कमाई बिना सम्भव छैन। त्यसोभए, यदि तपाईंसँग १ 18 छ भने हाम्रो च्याटसँग तपाईंको आफ्नै प्रसारण मार्फत वास्तविक पैसा कमाउनको लागि थुप्रै तरिकाहरू छन्:
होस्टमा सल्लाहहरू छोड्न दर्शकहरूलाई सोध्नुहोस्। यस उद्देश्यका लागि, त्यहाँ एक विशेष बटन छ, यी सुझावहरू तपाईंको खातामा क्रेडिट गरिन्छ र तपाईं तिनीहरूलाई तपाईंको Yandex खाता वा PayPal मा फिर्ता लिन सक्नुहुनेछ।
च्याट रूलेटले तपाईंलाई सेवाहरूको सूची सिर्जना गर्न र पैसाको लागि प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरण को लागी, यो क्लासिक अभिवादन दिन को लागी हुन सक्छ, वा केहि निश्चित गीत गाउन, साथ साथै विदेशी अनुरोधहरु को सबै प्रकार, नृत्य वा बस मुस्कान।
समीक्षा वा सम्बद्ध लि with्कको साथ समाचार पोष्ट गर्नुहोस् र सबै भुक्तानीबाट सबै भुक्तानीको %०% प्राप्त गर्नुहोस् जुन ती लि links्कहरू प्रयोग गर्ने र नयाँ प्रयोगकर्ताहरू भएका प्रयोगकर्ताहरूबाट।
तपाईं यूट्यूबमा शो को रेकर्डि upload अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र विज्ञापन मार्फत कमाउन को लागी, वा विज्ञापनकर्ताहरु संग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराई तिनीहरूको उत्पादनहरू प्रस्तुत गर्न।
तपाइँको देखाउनुहोस् र कमाउनुहोस्